Andron’ny Mpifankatia sy ny U2 ao amin’ny bilaogy Maraokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2018 3:56 GMT
Bono ao Maraoka
Mamita iraka any Etazonia.i Supertimba Manoratra momba ny fahatsapany voalohany mikasika ny firenena Dadatoa Samy izy. Ny lahatsorany dia tantara mahatsikaiky sady mahaliana momba ny dia tany Amerika amin'ny “Maraokana very amin'ny fandikan-teny” (Frantsay) araka ny tiany hiantsoany ny tenany
Ny Indiana (any India) any Amerika dia tsy misy ifandraisany amin'ny Shah Ruk Khan ary mahatsiaro ho tafintohina izy ireo raha miresaka amin'izy ireo momba ny Bollywood ianao.
Manana scoop indray i Samir, ary nanambara izy fa ilay vahiny mpandahateny ao amin'ny Fez Encounters 2006 dia i Bono kintan'ny rock malaza, mpihira sady mpamoron-kira malaza ao amin'ny tarika Irlandey U2.
Sambany handre izany eto ianao! Aza avela hilaza mihitsy fa tsy mamela anao hahalala ny tsaho sy fifosana ao amin'ny Medina izahay!
Mirary ny tsirairay tratry ny andron'ny mpifankatia i Lemrina, ary nanoratra tao amin'ny lahatsorany farany momba an'i Saint Valentin dokotera lasa pretra (Frantsay) sy maty tany am-ponja mba ho maritiora ankalazaina isaky ny faha-14 febroary.
Mandany ny andron'ny mpifankatia manirery (Frantsay) i Lady M, ary manoratra fanamarihana mahafinaritra momba ny fomba nampiasainy hankalazana ny andron'ny mpifankatia. Nefa azafady, aza manahy, tsy nisaraka tamin'ny vadiny izy. Any Grande-Bretagne i Robert ary hiverina tsy ho ela ao amin'ny Vadiny mpanoratra ny bilaogy Chez Rasade.
Mamoaka lahatsoratra mampalahelo feno fihetseham-po, momba ny toeram-pisotroana kafe iray ahafahany manadino ny zava-drehetra afa-tsy olona iray izay toa ankamamiany amin'ny fomba manokana i Selma.
Miverina amin'ny politika
Namoaka ny lahatsoratr'i Economist.com momba ireo vondron'orinasa manana fotoan-tsarotra hitadiava-namana i IBAHRINE. Indrindra taorian'ny tantara ratsy tao amin'ny Enron sy WorldCom namotika ny fiveloman'ireo mpiasa an'arivony.
Niteraka taranaka vaovao mpamono olona- izay afaka mipoitra avy any amin'ny toerana rehetra sy manimba ny lazan'ny orinasa ny fielezan'ny “media sosialy”—toy ny vondrona adihevitra antserasera, lisitra mailaka sy bilaogy— manerana ny aterineto. Matetika voaantoka ny fanafihana; indraindray tsy izany. Saingy tsy ny fahamarinam-baovao no tena resaka.
Chighaf kosa nandefa lahatsoratra momba an'i Sidi Moumen, faritra mahantra dia mahantra any Casablanca. Ary nanontany tena izy hoe rahoviana ny governemanta Maraokana vao hahita vahaolana afaka manome antoka ny fiainana mendrika ho an'ny Maraokana an'arivony izay mbola miaina ao amin'io faritra malaza ho mahantra io.
Tsy azonao sary an-tsaina hoe inona no dikan'ny hoe menatra ny tranony sy ny manodidina azy … isaky ny mankao aho, midoboka ny foko .. malahelo aho mahita ny mason'ireo ankizy miala amin'ny fifaliana miova ho fankahalana .. mba ho kivy.
Malahelo i Soumiaz izay nanomboka adihevitra antserasera tena mahaliana momba an'i Islamo sy ny Laika raha nahafantatra fa maneho hevitra fotsiny mba handratra azy ireo bilaogera sasany, fa tsy mandray anjara am-pahamarinana amin'ny e-adihevitra.
Nahoana no toy izao izany? Tena maalahelo aho ary matahotra fa tsy misy zavatra betsaka azontsika atao hanova ity tontolo ity, raha tokony hanome fanehoan-kevitra tsara ho anao ny olona mba hanampy anao hahatakatra.. dia miezaka manakivy anao ry zareo.
Miverina ao amin'ny Riadzany izay miresaka momba ny fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny fivorian'ny minisitry ny fampahalalam-baovao tamin'ny herinandro lasa tao Kairo ny lahatsoratra farany. Ary momba ny fanomezana endrika Arabo vaovao izany. Tantara mahafinaritra !!
Ny drafitr'asan'ny haino aman-jery nolaniana dia hovolavolaina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary hotsinjaraina mandritra ny dimy taona. Ny tanjona dia ny “hanitsy ny sary nodisoina nomena ny Arabo any ivelany”. Manodidina ny $ 22.500 ny vola natokana hamatsiana ity tetikasa ity, azo aloa mandritra ny dimy taona manaraka, araka ny fandraisana anjaran'ny fanjakana tsirairay amin'ny tetibolan'ny Ligy Arabo.
Tsidiho ny Crucivore ary ho tianao ny sary navoakany. Homey sy ny tena fandinihana tsara momba an'i Fez tsara tarehy.
Samir kosa nanolotra ahy ity sary ity, ary tena tiako be ilay izy ka mahatsiaro te-hizara izany aminao aho.
Izay ny androany. Amin'ny Alarobia heriny indray, Inshallah;)